Banijya News | » ठूला बैंकलाई विशेष नियमन ठूला बैंकलाई विशेष नियमन – Banijya News
प्रणालीगत रूपमा जोखिम निम्त्याउन सक्ने ठूला बैंकलाई राष्ट्र बैंकले विशेष नियमन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकको नियमन तथा सुपरिवेक्षण विभागले नियमन कार्य्विधि तयार पार्न अध्ययन सुरु गरेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले जानकारी दिए ।
ज्यादै ठूलो सम्पत्ति भएका व्यावसायिक प्रतिष्ठान टाटउल्टिए मुलुक वा विश्व अर्थतन्त्रै क्षति पुग्ने भन्दै त्यस्ता संस्थालाई जोगाउन सरकारले राहत दिनुपर्ने धारणा अन्तरर्रा्ष्ट्रिय वित्तीय मञ्चमा अघि सारिएको छ । यस्ता संस्थाको जोखिम मूल्यांकनदेखि प्राविधिक सघनतासम्मका विषयमा सूक्ष्म नियमन आवश्यक हुन्छ । सोही अनुरुप कार्य्विधि बनाएर केही बैंकलाई प्रणालीगत रूपमा महत्वपूर्ण बैंक (एसआईबी) घोषणा गर्ने तयारी राष्ट्र बैंकले थालेको हो ।
पुँजी, निक्षेप, कर्जादेखि विवेकशील नियमनका मापदण्डसम्मलाई हेरेर केही बैंकलाई एसआईबी घोषणा गरिने डा.भट्ट बताउँछन् । ‘हामीले जोखिमपूर्ण भनेका क्षेत्रमा कति कर्जा परिचालन गरेको छ भन्ने पनि हेर्नुपर्छ’, उनले भने । ठूला बैंकले ठूलै परिमाणमा निक्षेप संकलन गर्छन् । धेरैलाई ऋण दिएका हुन्छन् । धेरै मानिसको पुँजी जगेडा गरेका हुन्छन् र धेरैलाई रोजगारी पनि दिएका हुन्छन् । त्यस्ता संस्थासँग अरु किसिमका वित्तीय साधन पनि बढी हुन्छ । त्यसकारण ती संस्थामा समस्या आउँदा अरु बैंकमा पनि समस्या हुने र प्रणाली नै संकटमा पर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
यही कारण वित्तीय संकट आउँदा पनि त्यस्ता ठूला बैंकलाई जोगाउन सरकारले प्रयत्न गर्नुपर्ने हुन्छ । अमेरिका, बेलायतले एक दशकअघि नै यसरी बैंकलाई ‘बेलआउट’ गरिसकेका छन् । नेपालमै भिवोर विकास बैंकलाई राष्ट्र बैंकले पैसा दिएर टाट पल्टिनबाट जोगाएको थियो । ठूला संस्थाको जोखिम मूल्यांकन र सघन नियमन गर्ने उद्देश्यले यस्तो अभ्यास सुरु गरिएको हो । यसले बैंकको अवस्थालाई सूक्ष्म मूल्यांकन गर्न सघाउने भट्ट बताउँछन् ।
पछिल्लो समय बैंकको मर्जरले कुन बैंक बढी प्रभावशाली छ भन्ने निक्र्योल गर्न कठीन छ । अहिलेकै अवस्थामा भने ग्लोबल आईएमई बैंक सबैभन्दा ठूलो बैंक भएको छ । संस्थागत निक्षेप बढी भएको, खराब कर्जा र कर्पोरेट ऋण पनि बढी भएकाले यो बैंक प्रणालीगत जोखिमको हिसाबमा सबैभन्दा अगाडि आउन सक्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारी बताउँछन् । केही समयअघिसम्म एनआईसी एसिया बैंकले आक्रामक बाटो लिएपछि अरु बैंकरहरु एनआईसी एसियालाई नै सर्वा्धिक जोखिमपूर्ण मान्दै आएका थिए ।
के हो एसआईबी ?
सन् २००७–०८ को वित्तीय संकटपछि ‘सिस्टमेटिकल्ली इम्पोर्टेन्ट बैंक (एसआईबी)’ को सिद्धान्त अघि सारिएको हो । सन् २००९ मा बेलायतमा भएको युरोपेली संघ र अन्य १९ मुलुकको मञ्च ‘ग्रुप २०’को बैठकले संसारभरका ठूला र प्रणालीगत जोखिम निम्त्याउन सक्ने बैंकको सूची तयार पार्ने निर्णय र्गयो । त्यसपछि वित्तीय स्थायित्व बोर्ड नामक अर्को अन्तरराष्ट्रिय मञ्चले २०११ देखि त्यस्ता बैंकको सूची प्रकाशन गर्न थाल्यो ।
त्यसयता हरेक मुलुकले आ–आफ्नो अर्थतन्त्रमा प्रणालीगत जोखिम निम्त्याउन सक्ने बैंकलाई ‘एसआईबी’ घोषणा गर्न थाले । भारतमा एसबीआई, आईसीआईसीआई र एचडीएफसी बैंकलाई यस्तो बैंकको सूचीमा राखिएको छ । पाकिस्तानले स्टेट बैंक अफ पाकिस्तान (एसबीपी) लाई सन् २०१९ का लागि यस्तो बैंक घोषणा गरेको छ । नेपालमा भने पहिलोपटक यो वर्षको मौद्रिक नीतिमा यस्तो व्यवस्था समावेश भएको हो ।
यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा विनय बन्जराले लेखेका छन् ।